Ama-Petpals franchisees amabili afinyelela ekugcineni kwemiklomelo kazwelonke yePet Industry Federation (PIF) | I-Franchiseek
»Ama-Petpals franchisees amabili afinyelela ekugcineni kwemiklomelo kazwelonke yePet Industry Federation (PIF)
Ama-Petpals franchisees amabili abungaza ukufinyelela emaphethelweni emiklomelo kazwelonke yePet Industry Federation.
Ngezimpande ezibuyela emuva ngasekupheleni kwawo-1940 iPet Industry Federation imele izinhlangano ezinhlanu zokuhweba ezifuywayo. Banikezela ngesiqiniseko sekhwalithi yamabhizinisi kulo mkhakha, nawo wonke amalungu avuma ukunamathela kumashadi awo, amele inqubo engcono kakhulu kososeshini abahlukene.
Imiklomelo ibungaza impumelelo emikhakheni eminingi ehlukahlukene yemikhiqizo, izinsizakalo, izinkampani kanye nabantu futhi inikezela ngeplatifomu yokubona ubuhle nokwenza izinto ezintsha embonini yezilwane ezifuywayo.
Emikhakheni yemiklomelo engu-16 etholakalayo ukungena, iP Petals Darlington & Yarm, ephethwe nguDavid noSallyann Gray, ifinyelele kowamanqamu esigabeni se'Pet Service Business of the Year 'kanti uPpetals Chislehurst, ongaphansi kukaSandra noRay Hipwell yibona abangene kowamanqamu' Isigaba sebhizinisi elisha lonyaka.
I-Petpals yinhlangano ye-franchise enamabhizinisi angaphezu kwe-50 azimele, enakekela izilwane ezifuywayo kulo lonke elase-UK futhi ililungu eligcwele leBritish Franchise Association.
UDavid noSallyann Grey baphawule,
'Siyaziqhenya ngokufinyelela kowamanqamu wale miklomelo kazwelonke. Kuyaziwa kakhulu ukuthi imodeli yethu yebhizinisi ilungile futhi sinikeza ikhwalithi nobuchwepheshe esilwela ukukufeza nsuku zonke. Besihlale sikugcina ukuthi ukuze ube ngama-Petpals franchisees amahle akumele uthande izilwane kuphela, kepha futhi kufanele wazi nokuthi uqhuba kanjani ibhizinisi elihle. Asiyona indawo enkulu kakhulu yePetpals kwinethiwekhi, kepha sigxila kakhulu kubasebenzi bethu nasezinhlelweni zebhizinisi, okusisizile saba ngabaphumelela kakhulu.
'Sisebenza kanzima futhi ukusebenzisana nosomabhizinisi abaningi ezingeni lendawo. Sisanda kubamba iqhaza elikhulu ekusebenzisaneni noMkhandlu waseDarlington Borough kanye namabhizinisi endawo, ukuqinisekisa ukuthi ama-PSPO's (Public Space Protection Orders) asetshenziswa ngendlela efanele futhi siyaziqhenya kakhulu ngokuba neqhaza eliphambili ekwakheni iqembu elisha elisebenzayo - ubambiswano nomkhandlu, ukuletha uhlelo lwezemfundo ukuze kuzuze bonke abahlali, kulokho okukholakala ukuthi kungokokuqala kwalolu hlobo e-UK. '
I-Petpals Chislehurst iphethwe nguRay noSandra Hipwell. USandra ungumgcini wamabhuku ezimali kanti uRay phambilini wayeqeqesha abashayeli beLondon Fire Brigade. Bathenga i-franchise yabo ngasekupheleni kuka-2018 abagijima ndawonye.
'Sishaywa umoya ukuthi sesifinyelele kowamanqamu esigabeni se-'New Business of the Year'. Kusukela cishe mzuzu lapho sivula khona iminyango yethu ePetpals Chislehurst bekungapheli. Sibe namakhasimende enza ukubhuka ngaphambi kokuba sibuye ekuhambiseni iqoqo lethu lokuqala lamapheshana phakathi nesonto lethu lokwethulwa nomphathi wokuxhaswa kwesifunda sePetpals! Ihhovisi elikhulu lasisiza kakhulu ngalezo zinsuku zokuqala, lasikhomba ekwethulweni kwethu ngezeluleko zokumaketha nezokukhangisa esasingazi ngazo.
'Sijabule kakhulu ngokuwina i-'Best Start-Up Franchise' engqungqutheleni ka-2018 Petpals futhi saphuma isibili ku- 'Most Improved Franchise Performer' ngo-2020. Yize sibuzwe kaningi, asicabangi ukuthi kukhona 'imfihlo' empumelelweni yethu, simane sibeke izilwane ezifuywayo phambili njalo futhi abanikazi bazo bayakwazisa lokhu. Kubalulekile kithi ukuthi njalo lapho sivakashela ikati noma isilwane esincane noma sihamba noma sigibela inja, baba nokuhlangenwe nakho okuhle impela.
'Sinamakhasimende amaningi angabasebenzi abalulekile, ebesilokhu sibahambela ngesikhathi sobhadane lweCorona Virus. Lawa maklayenti ayazi ukuthi bangathembela kithi ukuthi sinakekele izilwane zabo ezifuywayo, njengezabo, ngenkathi beya ukusebenzela i-NHS ekuphakameni kwesifo; sikholwa ukuthi yilolu hlobo lokuzinikela nobuchwepheshe olusenza sihluke kulabo esincintisana nabo. Uma singaba nenhlanhla yokuwina lo mklomelo siyazi ukuthi amaklayenti ethu angasijabulela, bekungaba wukuqhekeka ikhekhe ngemuva kokuqala okumangazayo futhi siwela yonke iminwe yethu singaletha indebe ekhaya likaPetalsals Chislehurst. '
I-MD ye-Petpals uKevin Thackrah uthe,
'Ukungabi nabanikazi bama-franchise bethu oyedwa kowamanqamu wale miklomelo ehlonishwayo kazwelonke kuyizindaba ezinhle kakhulu nokuthile esisehhovisi elikhulu, futhi nakulo lonke inethiwekhi, siyaziqhenya ngakho. Kuyaphawuleka ukuthi zimelela zombili i-franchise entsha futhi esungulwe okuhle ukubona. Abantu abakaze babe yinombolo ePetpals, bayingxenye yomndeni wakwaPetpals futhi sibasekela bonke ngendlela efanayo kusuka kubasebenzi bethu abanolwazi kakhulu ehhovisi elikhulu, kwinethiwekhi yethu yokusekela yama-franchisees angama-50. Ngibafisela okuhle kodwa bobabili kowamanqamu futhi ngibheke phambili ekugubheni impumelelo yabo kungekudala. '
KUPHELA ngo-SEPTEMBA 2020
I-Petpals UK (Ltd) ingumhlinzeki ohola phambili wase-UK wokunakekelwa kwesilwane okuhamba phambili, okuqeqeshiwe, kwezilwane ezisukela ezinjeni nasemakati kuya ezifuyweni ezincane isib. Onogwaja, ama-gerbils, izinyoni, ama-exotic
Izinsizakalo zePetpals zifaka:
Ukuhlala kwezilwane ezifuywayo
Ukugibela ekhaya - izinja nezilwane ezifuywayo
Ukuvakashelwa kokunakekelwa kwabadala asebekhulile
Isevisi yamatekisi ezifuywayo
Kungathintwa uPetpals ku:
I-Basepoint Business and Innovation Center, eCaxton Close, East Portway, Andover, Hampshire, SP10 3FG
Ucingo: 01264 326362
UPetpals uyilungu eligcwele leBritish Franchise Association ne-EWIF (Ukukhuthaza Abesifazane Ukuba Bangene Franchising)
I-Bridgewater Home Care Franchise izokunikeza ithuba lokwakha ibhizinisi lakho eliphumelelayo ekukhuleni ngokushesha, njalo…
Isifinyezo I-Zedify iyisisombululo se-zero-ekuzisweni okuhanjiswa kuqala nemayela kokugcina emadolobheni. Sinikezela ngamabhizinisi ngensizakalo…